Onye kacha egwuregwu RPG dị ọcha karịa mgbe ọ bụla na-adịghị agwụ agwụ | Gam akporosis
N'abalị abalị, ọ bụ ihe kachasị mkpa RPG ma ọ bụ RPG kachasị ọcha na ị nwere ike ịchọta taa ma bụrụkwa otu n'ime ntụaka n'ime ụdị. Dabere na Dungeons & Dragons, RPG nke America mepụtara site na Gary Gygax na Dave Arneson, edepụtara ya na 1974.
Ugbu a ị nwere ike ịghọta ihe kpatara na Nightwinter na-achịkọta ụdị dị mkpa nke ụdị a. Ma ọ bụ na ụbọchị ndị a anyị nwere ihu ọma nwee ike ịzụta ya maka euro 2 site na Playlọ Ahịa Google, ebe ọnụahịa ya na-abụkarị ihe dị ka € 10. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ egwuregwu nke ndị ịchọrọ ọkara awa gị iji nweta ihe ndị bụ isi na ụwa nke aka gị nke ị ga-abụ onye protagonist, gaa n'ihu.
1 Ọrụ kachasị dị na gam akporo gị na 2GB nke data
2 N'abalị abalị: Enwekwukwa Edition na Multiplayer Online
3 Kachasị maka mobile
Ọrụ kachasị dị na gam akporo gị na 2GB nke data
N'abalị abalị: Enwekwukwa Mbipụta na-ewetara ọdịnaya niile sitere na PC gị nke mere na anyị nwere ike ịnụ ụtọ Dungeon & Dragons site na mkpanaka anyị. A mbipute kachasị maka mmekọrịta site na ihuenyo mmetụ aka na nke ahụ na-adọnye gị ụwa nke njem na echiche efu.
Anyi aghaghi ikwu na ọdịnaya nile nke Nightwinter na-ewepu anyi na Diamond Edition ya na mgbasa ozi mbu ya na ngwugwu mmeba abuo. Will ga-enwe ike ịgabiga obodo ndị dị ize ndụ, dungeons jupụtara na nnukwu anụ na njem niile n’inyocha oke ọhịa na mbara ọzara. Onyunyo nke Undrenti na Hordes nke Underdark sokwa. N'otu oge ahụ, enwere modulu adịchaghị atọ anyị nwere ike ịzụta iji nweta awa 40 nke akụkọ ọhụụ.
Isi ihe ọzọ ị ga-eburu n’uche Neverwinter: Enhanced Edition bụ egwuregwu ahụ Kachasị maka mbadamba na ekwentị nwere opekata mpe 7 sentimita asatọ nke ihuenyo. Ọ bụ ezie na igwu ya na Galaxy S9 ma na-abawanye nha nke interface ọ nwere ike igwu ya n'ụzọ zuru oke.
N'abalị abalị: Enwekwukwa Edition na Multiplayer Online
Ọ bụrụ na anyị kwuru na anyị ga-achọ ọkara otu awa naanị maka ihe ndị bụ isi, anyị na-ekwu na ọ bụ naanị na okike nke dike anyị ka anyị ga-ahọrọ klaasị ya, agbụrụ ya, ngwugwu agbụrụ na ọbụnakwa chi anyị ya na anyị nwere ike ịlụ ọgụ na ndapụta dị iche iche megide onye iro ma ọ bụ ndị iro ọzọ. Anyị na-akwado ka ị wepụta oge niile n'ụwa iji mepụta agwa gị, ebe ọ bụ na ụdị egwuregwu ga-adabere ọtụtụ na ya.
Anyị na-echeta nke ahụ A na-ahụta Nightwinter dị ka otu n'ime egwuregwu egwuregwu zuru oke n'akụkọ ihe mere eme nke egwuregwu vidio. Nke a bụ n'ihi na ọ na-eji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu niile nke mbipụta nke atọ nke Dungeons & Dragons. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mkparịta ụka ahụ na agwa ọ bụla ị hụrụ, na-eme nnyocha banyere ngwa ọgụ, iji ngwa ọrụ maka ịgha mkpụrụ, na -emepụta ọrụ aka ma ọ bụ na-emeziwanye osisi gị, ga-abụ naanị akụkụ nke oge egwuregwu niile nke Neverwinter Night ga-ewe gị.
Ọ bụrụ na anyị tinyeworị na eOnye na-eme ọtụtụ ihe n'ịntanetị bụ ihe ọzọ dị mkpa nke Neverwinter Night: Enhanhan Edition, ị nwere ike ugbu a dị njikere ịnụ ụtọ ụdị egwuregwu ọ bụla nke ọtụtụ, ọkachasị ndị Nna-ukwu Dungeon na-edu, ga-abụ ihe na-atọ ụtọ, nke a na-atụghị anya ya na juputara n'ụdị egwuregwu niile.
Na olee otu anyị nwere ike na-ekwu okwu ọtụtụ awa banyere Neverwinter Night, anyị ga-eme ka njikarịcha rụrụ nke doro anya ka ị nwee ike ịnụ ụtọ egwuregwu a dị egwu na mkpanaka gị. Anyị nwere ụzọ abụọ ịkwaga, site na ịpị na teren ma ọ bụ ndị iro / npcs, ma ọ bụ iji mkpisi. Iji nwee ike imeghe menus ndị ọzọ, ma ọ bụrụ na anyị akpọ ụdị klaasị ndị ọzọ anyị ga-enyocha, site na ịpị onye iro ogologo oge, nhọrọ dị iche iche ga-apụta ịwakpo ma ọ bụ lee anya.
N'abalị abalị: Enhanced Edition ka kachasị nke anyị ga - eji oge ụfọdụ jide ya. Anyị nwere ogwe uzo ngwangwa na ala na n'akụkụ aka nri na ngwongwo, anwansi ... Eziokwu bụ na ọ bụghị ihe ọjọọ ma ọlị, ọ bụ ezie na ọ na-egosi na site na ihuenyo 7 ma ọ bụ 8 nke anụ ọhịa, anyị nwere ike ịmasị ọmarịcha ahụmịhe egwuregwu a maka Gam akporo.
Nyochawa ya nke ọma rụrụ na anyị nwere niile na ekpomeekpo na mbụ Neverwinter ehihie na abalị bụ, albeit maka mobile. Anyị nwere nhọrọ iji hazie ihe niile, yabụ ọ bụrụ na ị hụ enweghị arụmọrụ, ị nwere ike belata ụkpụrụ iji nwetakwuo ọmarịcha egwuregwu a. O nweghi njikarịcha ya na mmelite ya iji meziwanye ya, mana ka ọ dị, ọ na-akpọrọ anyị ozugbo na ahụmịhe egwuregwu niile anyị na-atụ anya ya yana ihe niile ọtụtụ egwuregwu ya pụtara.
N'abalị abalị: Enhanced Edition adịghị n'asụsụ Spanish, ọ bụ ezie na ọ ga-abịa n'oge na-adịghị anya na nsụgharị ọhụrụ dịka onye nrụpụta gosipụtara. Egwuregwu na-eweta ihe kachasị mkpa nke ọrụ dị ọcha nke Dungeons & Dragons na nke ndị na-akwado ụdị egwuregwu a enweghị ike ịsị mba. Nnukwu mbata na gam akporo, dị ka nke dị na Runescape n'izu gara aga, iji nwee ọtụtụ egwuregwu.
N'abalị abalị: Enwekwukwa Mbipụta
Ọrụ kachasị dị ọcha na mkpanaka gị
Onye otutu ya di nkpa
Emechara nnukwu ọrụ
Etinyego maka ngosipụta 18: 9
Ọ bụghị na Spanish ma, ma ọ ga-abịa
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » The purest RPG na gam akporo si kpara Neverwinter ehihie na abalị: enwekwukwa Edition